Petrakevitra momba ny fanananny Kasimiry firazanana jiosy
Pointe-Noire (Repoblikan i Kôngô)
Fanakona-masoandronny 1 Septambra 2016
Sakramenta ao aminny fiangonana katôlika
Tetiandro litorjikanny Eglizy katôlika
Tantaranny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany
Fiteny hebreonny Baiboly
Bokinny Olona Goavambe
Ny fiteny atabaskana dia vondrom-piteny ngeza be ao avaratra sy atsimon i Amerika avaratra. Ny fiteny atabaskana dia fianakavina faharoa amin ny isan olona mpiteny azy sy amin ny isan ny teny ; amin ny haben ny tany, ny Aljika ihany no manana vel ...
Ny fiteny litoanianina dia teny ibeazanny mponina litoanianina. Io fitney io dia manana sata teny ofisialy any Litoania ary aminny Vondrona Eoropeana. Ny isanny litoanianina manana ny teny litoanianina ho teny nibeazana dia isaina eo aminny 2.9 t ...
I Kirenaik na Sirenaika dia faritra ao Libia izay efa nitondra io anarana io taminny Andro Taloha izay faritany rômana taloha tao aminny tanàna grika taloha atao hoe Kirena na Sirena. Atao hoe Κυρηναία / Kurênaía izy aminny teny grika fa Cyrenaic ...
Muammar Gaddafi dia mpanao politika, mpanao asa soratra, mpanoratra mizaka ny zom-pireneni Libia teraka ny 1 Janoary 1942 ary maty ny 20 Oktobra 2011
I Dionisiosy avy any Aleksandria na Dionisiosy Lehibe dia rainny Fiangonana, evekani Aleksandria sady olo-masina kristiana niaina taminny taonjato faha-3. Tsy dia misy zava-pantatra firy ny amini Dionisiosy, afa-tsy izay lazaini Eosebiosy avy any ...
Ny Fiangonana katôlika marônita na Fiangonana antiôkiana siriaka marônita na Fiangonana marônita dia isanireo fiangonana katôlika tatsinanana. Atao hoe Patriarkani Antiôkianny Marônita ny lohanny fiangonana, izay monina ao Bkerké any Libàna. Ny p ...
I Arama dia faritra tao avaratra-atsinanan ny Atsinanana Akaiky eo anelanelan ny tangoron-tendrombohitr i Libàna sy ony Eofrata izay mifanandrify amin i Siria ankehitriny. Atao hoe Arameana ny mponina tamin io faritra io tamin ny Andro Taloha tam ...
Thomas de Celano Guttorm de Norvège Athir al-Din al-Abhari Yona Gerondi Ulrich von Liechtenstein Pierre de Vendôme Béatrice de Nazareth Dōgen Helene Pedersdatter de Strange Étienne Boileau Marie de Bourbon-Dampierre Pierre de Montereau Ahmad El B ...
Gautier IV dEnghien Lippo Dalmasio Nuno Álvares Pereira Facino Cane Zyton Amédée VII de Savoie Jean de Médicis 1360-1429 Jean de Béthencourt Ming Yongle Francesco Zabarella Philippa de Lancastre Georg von Liechtenstein-Nicolsburg Giovanni Dominic ...
Ny Eglizy Katôlika Apôstôlika Rômanina eto Madagasikara dia isanny Fiangonana katolika maneran-tany izay eo ambany fitarihana ara-panahinny Papa ao Rôma. Misy mpivavaka maherinny 4 000 eo ho eo io fiangonana io, izany hoe iray ampahefatry ny mpon ...
Ny Fiangonana Ortôdôksa eto Madagasikara dia fiangonana kristiana miorina eto Madagasikara izay isanny Fiangonana tatsinanana efa tafasaraka taminny Fiangonana Katolika tany aloha. Mino ny Trinite ny Ortôdôksa. Fehinny Fiangonana Ôrtodôksani Alek ...
Ny Fiangonana Pentekotista Mitambatra dia antokom-pinoana kristiana eto Madagasikara izay sampanny United Pentecostal Church International. Araka io anarany io dia ao aminny firehana pentekotistanny sampana ara-pilazantsaranny kristianisma no mis ...
Ny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany eto Madagasikara dia fiangonana voaorina taminny taona 1993 eto Madagasikara izay sampanny Fiangonani Jesoa Kristy ho anny Olomasinny Andro Farany maneran-tany. Fantatry ny Malagasy aminn ...
Ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito eto Madagasikara dia fiangonana kristiana izay nipoitra aminny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito any an-dafy ary niorina teto Madagasikara taminny taona 1927.
Ny Skotisma Zazavavy eto Madagasikara dia fiombonanny fikambanana skoto zazavavy eto Madagasikara. Ahitana mpikambana miisa 25 152 ao taminny taona 2008. Taminny taona 1941 no niforonany ary lasa mpikambana ao aminny World Association of Girl Gui ...
Ny Fikambanana Apokalypsy eto Madagasikara dia fikambanana na fiangonana natsangani Pasitera Mailhol André Christian Dieu Donné taminny taona 1996. Mifototra manokana aminny fanazavana sy fampianarana ny misiterinny bokinny Apokalypsy ny fikamban ...
Ny Vavolombeloni Jehovah eto Madagasikara dia fikambanana kristiana miorina eto Madagasikara sy miray aminny Vavolombeloni Jehovah maneran-tany. Ao Antananarivo no ahitana ny foibeny atao hoe Betela. Miisa any aminny 34 980 ny Vavolombelona mitor ...
Ny Misiona Evanjelika Teratany eto Madagasikara, izay hafohezina hoe METM, dia isanireo fiangonana nohavaozina eto Madagasikara izay naorinny Pastora Rakotobe Andriamaro tamin’ny taona 1955. Niara-niasa tamin’ny Société Evangélique Missionnaire d ...
Ny Institut Pasteur eto Madagasikara na Institut Pasteur de Madagascar dia toeram-panaovana asa fikarohana ara-tsiansa izay miahy tena sady tsy natao hahazoana tombony ara-bola ary eken ny fitondram-panjakana malagasy fa ilaina ho an ny tombontso ...
Ny Indô-ariana na Indiana dia vondrom-poko maro miteny amin ny fiteny indô-ariana, izay zana-bondron ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana. Misy iray lavitrisa any ho any ny mpiteny indô-ariana, ka ny ankamaroany dia avy ao amin ny zana-kontinenta ...
Ny saikanosin i Malezia na saikanosy Maley na saikanosy Malay na saikanosin i Malacca na saikanosin i Malakka dia saikanosy ao Azia Atsimo-Andrefana izay manomboka ao amin ny andilan-tanin i Kra any Tailandy harany amin ny andilan-dranomasin i Jo ...
Alfred Hart Everett dia mpahaisiansan-javaboahary mizaka ny zom-pireneni Fanjakana Mitambatra, Malezia teraka ny 11 Oktobra 1848 ary maty ny 18 Jiona 1898 tao London
Teresa Teng, ny malaza any Asia Taiwan mpihira, izy no ny Aziatika sy any Azia superstar mpanjakavavinny pop mozika. Nihira izy sinoa hira, Japoney hira, Indoneziana hira, Kantone hira, Taiwanese hira ary Anglisy hira. Teraka taminny Janoary 29, ...
Air Madagascar dia orinasa fitaterana aminny alalanny fiaramanidina malagasy, izay naorina ny taoan 1961. Taminizany fotoana izany, Madair no anarany, izay novaina ho Air Madagascar ny taona manaraka.
I Shiva dia andriamanitra fahatelo ao amin ny trinite hindo, ka ny roa hafa dia i Brahma sy i Vishnu. Atao hoe शिव / Śiva izy amin ny teny sanskrita. Indraindray dia heverina fa i Shiva no andriamanitry ny iôga, izay manana ny fahalalana ny zava- ...
Nauru nifaninana taminny lalao Olaimpika 2012 tany Londona, izay natao taminny 27 jolay ka hatraminny 12 aogositra 2012. Ny firenena ny fandraisana anjara aminny London nanamarika ny fahadimy niseho tao aminny lalao Olaimpika satria ny zava-bitan ...
Oscar Bonfiglio dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Meksika teraka ny 5 Oktobra 1905 tao Meksika ary maty ny 4 Novambra 1987 tao Meksika
Juan Carreño dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Meksika teraka ny 14 Aogositra 1909 tao Mexico ary maty ny 16 Desambra 1940 tao Mexico
I Torkestàna dia faritra tao Azia Afovoany izay hita eo anelanelanny Ranomasina Kaspiana ao andrefana sy ny tany efitri Gobi ao atsinanana. Voazara roa i Torkestàna ka ao i Torkestàna Andrefana sy i Torkestàna Atsinanana. Nisy koa ny Torkestàna a ...
Ny fiteny makoa dia fiteny banto izay tetenin ny olona ao Môzambika sy ao Tanzania ary ao amin ny Repoblikani Kôngô. Olona mihoatra ny 4 000 no miteny makoa. Telo ny sampana lehiben io fiteny io, dia ireto: ny fiteny sirima izay tenenin ny olona ...
Ny Iaô na vahoaka iaô dia vahoaka banto ao Afrika tapany Atsimo, izay monina indrindra ao Môzambika, nefa hita koa ao Malaoy sy any Tanzania, ao amin ny tendrony atsimon ny farihy Malawi.
Analavelona dia tangorom-bohitra madinika ao amin ny faritr i Fiherenana, izay manaraka ny andavan ny morontsiraky ny Lakandranon i Môzambika avy atsimo mianavaratra. Any amin ny 50 km miala ny morontsiraka no misy azy, eo anelanelan ony Fiherena ...
Ny farihy Malawi dia iray amin ireo atao hoe Farihy Lehibe ao Afrika Atsinanana, izay nantsoina hoe farihy Nyasa na Nyassa na Niassa tany aloha. Ny morony dia zarain ny firenena telo: i Malaoy sy i Môzambika ary i Tanzania. Miovaova ny mari-panan ...
Ny andilan-dranomasina, izay mety hantsoina hoe lakandrano ihany koa, dia sampan-dranomasina lavalava somary teritery eo anelanelan ny morontsiraka roa izay manamorona azy, ka mampifandray velaran-ranomasina roa. Ny andilan-tany no mifanohitra am ...
Ny Soahily dia vahoaka maro ao Afrika Atsinanana miteny soahily, izay isan ny fiteny banto niaharan ny fiteny arabo. Ankoatry ny fiteniny dia manana kolontsaina iraisana azy manokana ny vahoaka soahily samihafa. Manodidina ny roapolo ny firenena ...
I Fred Gisa Rwigema dia mpanao pôlitika roandey, isanireo mpanorina ny antoko Front patriotique rwandais sady heverina ho olomanga teo aminny tantarani Roanda na dia tsy niaina tao Roanda aza izy nandritra ny ankabeazanny androm-piainany. Teraka ...
Ny fiteny neerlandey dia fiteny any Nederlandy. Izy io dia manana sata ôfisialy ao Nederlandy, Sorinama ary ao amin ny tapany avaratr i Beljika. Eo amin ny 22 tapitrisa no miteny nerlandey eran izao tontolo izao. Amin ny fiteny neerlandey dia ata ...
Ny Indô-iraniana, izay atao hoe Ariana koa, dia vahoaka indô-eorôpeana izay vondrom-poko miteny indô-iraniana, izay sampana lehibe ao aminny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, ao aminireo faritra lehibe ao Eorazia. Isanireo vahoaka indô-iraniana ...
Ny Faritra ora dia faritany iray manana ora iray. Ny ora anatinio faritany io dia tsy maintsy mitovy daholo. I Sir Sanford Fleming no nanome anio sistema io taminy taona 1876, ary ny meridianina ny Greenwich ny repèreny. Misy faritra ora 24 era-n ...
Ny fiteny igbo na fiteny ibo dia fiteny teneninolona miisa eo anelanelanny 20.000.000 sy 30.000.000 ao Nizeria, izay atao hoe Igbo ihany koa, indrindra ao aminny tapany atsimo-atsinanani Nizeria atao hoe Biafra tany aloha, sy atsimo-atsimo-atsina ...
Filistina ao aminny Baiboly
Ny Filistina dia firenena taminny Andro Taloha izay resahina aminny Baiboly, nanorim-ponenana taminny tany atsimo andrefana manamorona ny Ranomasina Mediteranea ao Kanaana izy ireo, izany hoe aminny morontsiraka avy ny Gaza hatrany Jaffa ankehitr ...
Fiteny ao Oganda
Maro ny fiteny ao Oganda. Ny telo amby efapolo amin ny teny tenenina ao dia azo zaraina ho fianakaviam-piteny efatra, dia ny fiteny banto, ny fiteny nilôtika, ny fiteny sodanika afovoany ary fiteny koliaka roa. Amin ireo rehetra ireo dia fitenin ...
I Idi Amin Dada dia mpanao pôlitika ogandey, teraka taminny 17 Mey 1928 tao Koboko ary maty tamin ny 16 Aogositra 2003 tao Djeddah. Taminny fahaterahany dia i Idi Awo-Ongo Angoo no anarany. Miaramila sy olom-panjakana izy, izay nampihatra fitondr ...
Ny fiteny loganda dia fiteny banto tenenina ao Oganda ka miisa any aminny 4 tapitrisa any ny mpiteny azy. Fiteny faharoa izy ka manaraka ny fiteny anglisy sady mialoha ny fiteny soahily izy.
I Apollo Miltone Obote dia mpitondra fanjakana angandey izay filoham-pirenen i Oganda tamin ny taona 1966 hatramin ny 1971 sy tamin ny taona 1980 hatramin ny 1985, teraka tamin ny 25 Desambra 1925 tao Akoroko ary maty tamin ny 10 Oktobra 2005. Iz ...
I Patrick Karegeya dia miaramila mpioko sady lehibenny sampan-draharaha mpikaro-baovao tao Oganda sy tao Roanda. Teraka taminny taona 1960 tao Mbarara any Oganda izy ary maty nisy nanakenda taminny 1 Janoary 2014 tao Johannesburg ny Afrika Atsimo ...
I Faustin Kayumba Nyamwasa dia isanireo mpanorina ny Front patriotique rwandais izay nahitana koa ani Paul Kagame. Izy no lehibenny etamazôronny tafika roandey taminny taona 1994 hatraminny 2002. Teraka taminny taona 1962 izy ary isanireo Totsy m ...
Ny Baniaroanda dia vondrona ara-kolontsaina sy ara-piteny izay miteny kiniaroanda sy monina ao Roanda sy any aminny faritra nikambana taminny Fanjakani Roanda talohanny fanjanahan-tany. Mitsinjara aminny zana-bondrona telo ny Baniaroanda, dia ny ...
I Warren Kizza Besigye Kifefe dia mpitsabo sy mpanao pôlitika ogandey, kôlônely tao amin ny tafika ogandey. Nilatsaka hofidina tamin ny fifidianana filoham-pirenena tamin ny taona 2001 sy 2006 izy. Teraka tao Rukungiri taminny 22 Avrily 1956 izy. ...
Fitsarana Heloka Bevava Iraisam-pirenena dia fitsarana maharitra hanandrana hitsara ireo voampanga ho famonoana ny mpiray tanindrazana, heloka bevava taminny olombelona, ny heloka bevava amin’ny faha-olonana ary ny heloka bevava amin’ny ady. Amin ...
Petrakevitra momba ny fanananny Kasim ..
Tantaranny Fiangonani Jesoa Kristy ho ..